prachanda | रिपोर्टर्स नेपाल रिपोर्टर्स नेपाल
के एक्लिएकै हुन ओली ? सान्त्वना दिदै प्रचण्ड, खनालको चेतावनी
फागुन १५, काठमाण्डौ । सत्तारुढ दल यतिबेला चरम संकटमा परेको छ । यो संकटबाट उत्रिन नेकपालाई त्यति सहज देखिएको छै्रन । यद्यपी जुनसुकै बेला जस्तो
नेकपालाई जनताको एकमात्र पार्टी बनाएर विश्राम लिन्छु : प्रचण्ड
काठमाण्डौ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो पार्टीलाई एक वर्षभित्र सम्पूर्ण जनताको एकमात्र पार्टी बनाउने दावी गरेका छन् । नेकपा सम्पर्क समन्वय कमिटीद्वारा शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित
गणतन्त्रको रक्षाका लागि संक्रमणकालिन न्याय लक्ष्यमा पु¥याउनुपर्छ : दाहाल
काठमाण्डौ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउनु नै आफ्नो प्रमुख चाहना भएको बताएका छन् । अन्य कुनै राजनीतिक उद्धेश्य नरहेको जिकिर गर्दै
नेकपा एकता प्रक्रियाको बाधक केपी ओलीको अध्यक्ष पद !
काठमाण्डौ । सत्तारुढ दल अर्थात पूर्व माओवादी र पूर्व एमाले । दुई ठूला दल मिलेर बनेको नेकपा सहज अवस्थामा छैन । शीर्ष तहबाट सुरु भएको एकता तल्लो तहसम्म पूरा हुन
प्रचण्डले गरे नेताहरुको जिम्मेवारी हेरफेर
काठमाडौं १० भदौ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले नेताहरुको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नेताहरुको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको हो । केही नेताहरुको जिम्मेवारी
प्रचण्ड पार्टीमा सक्रिय आफ्नो नेतृत्वमा बोलाए पहिलो पटक बैठक
काठमाडौं ९ भदौ । नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पार्टीमा सक्रिय भएका छन् । उनले आज पहिलो पटक आफ्नो अध्यक्षतामा बस्नेगरि बैठक बोलाएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा
समाजवादमा मौलिक अधिकार भनेको स्वस्थ जीवन हो : प्रचण्ड
काठमाडौं, ३२ साउन। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समाजवादको मौलिक अधिकार भनेको स्वस्थ जीवन भएको बताएका छन् । नेपाल प्रगतिशील चिकित्सक संघद्वारा राजधानीमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा
पार्टी एकता गरेकोमा प्रचण्डलाई पश्चताप
काठमाडौं, ३२ साउन । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी एकता गरेकोमा पश्चताप लागेको आशयको अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनले एकताका लागि पनि
प्रचण्ड छोडेर ओली क्याम्पमा गौतम, एकता प्रक्रिया थप अन्योल
साउन २८, काठमाण्डौ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा विवादै विवादको अर्को नाम हो भन्दा फरक नपर्ला । पार्टीको नाम एउटै भए पनि त्यहाँ दुईवटा दलका नेताहरुको मिश्रण छ
नेकपा विवाद : पर्खाई २८ गतेको
साउन २५, काठमाण्डौ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाभित्र स्कुल विभागलाई लिएर उत्पन्न विवाद तत्काल समाधान हुनेमा शंका उत्पन्न भएको छ । पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्माओली आफ्नो एक साता
ओली नहुँदा दाहाल सक्रिय, गौतम ओली ‘क्याम्प’ मै फर्किन खोजेको चर्चा
काठमाडौं २३ साउन । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा अध्यक्ष केपी ओली विदेशमा रहेका बेला अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पार्टीमा सक्रिय भएका छन्। दाहालले एकीकरण प्रक्रियालगायत विषयमा पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूसँग व्यक्तिगत छलफल
ओलीसँग प्रचण्डको आत्मसमर्पण- मणी थापा, स्थायी समिति सदस्य, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य मणि थापासँग भूमिगत र खुल्ला मात्र नभई सशस्त्र विद्रोहको लामो राजनीतिक अनुभव छ । कम्युनिष्ट राजनीतिको आरोह र अवरोहबाट खारिएका बौद्धिक नेता थापा स्पष्ट
व्यापारीहरुले एकर्फी रुपमा पसल खोलेपछि काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका सिडिओ छलफलमा
टनेल नै क्वारेन्टिन बनेपछि
दैलेख, २२ जेठ : जिल्लाको पश्चिमतिर पर्ने ठाँटीकाँध गाउँपालिकाभरि निर्माण गरिएका विद्यालय भरिएपछि गाउँभन्दा केही
अमेरिकी विदेशमन्त्री पोम्पेओद्धारा विभिन्न देशका विदेशमन्त्रीसँग छलफल
२२ जेठ। अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले विभिन्न देशका विदेशमन्त्रीहरुसँग कोभिड १९ तथा अन्य विषयहरुका बारेमा